Teller For Branches | Yoma Bank
Teller For Branches
ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း၊ Customer အသုံးပြုလိုသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအား သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအသီးသီးသို့ ချိတ်ဆက်ပေး၍ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရန်။
Customer များအားလွယ်ကူချောမွေ့သောဘဏ်အတွေ့အကြုံပေးနိုင်ရန်အတွက် ငွေသွင်းငွေထုတ်ဝန်ထမ်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် Customer များ၏ လိုအပ်ချက်များကို သိရှိပြီး၊ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီအောင် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် Customer Service Standards များကို တိုက်ရိုက်အသုံးချခြင်းဖြင့် ဘဏ်ခွဲ၏ Targets များဖြစ်သော ဝန်ဆောင်မှု အသစ်များ ထပ်တိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီး Customer များ အသုံးပြုလိုသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်ဆန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် ရှိပြီးသား Customer များကို ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုရရန်။
လုပ်ငန်းရေးရာ - သွက်လက်တက်ကြွသော အရောင်းဝန်ဆောင်မှု (၁၀%)
- Customer ၏လိုအပ်ချက်များကို သိရှိစေရန် သွက်လက်တက်ကြွစွာမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းများပြုလုပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ (Sale & Service Teller ၊ Sale & Service Officer ၊ Account Manager ၊ Branch Manager စသည်) များအား ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရန်။
Customer ဝန်ဆောင်မှု (၁၀%)
Customer များအသုံပြုလိုသော ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်တွင် စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန် -
- မိမိလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအသီးသီး၏ အချက်အလက်များအား သိရှိနားလည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူသို့ မြန်ဆန်စွာချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရမည်။
- Customer Service Standards များအား အသုံးပြု၍ ရင်းနှီးဖော်ရွေပြီး စိတ်ဝင်စားမှုရှိသော ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည်။
- မျက်လုံးချင်းဆိုင်စကားပြောခြင်းအလေ့အထကို ကျင့်သုံးရန်။
- ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ရန် ဖြစ်နိုင်လျှင် Customer အမည်ကို အသုံးပြုရန်။
- Transaction ကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး Customer အနေနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ ရှိ/မရှိမေးရန်။
- ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီး နှုတ်ဆက်ရာတွင် Customer ၏အမည်ကို အသုံးပြုရန်။
- အဆက်အသွယ်သစ်များရှာဖွေခြင်းနှင့် ရှိပြီးသား များကို ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း။
- လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဘဏ်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရန်။
- တစ်နေ့တာစာရင်းပိတ်ရာတွင် အမှားအယွင်းမရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
- Customer မကျေနပ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးရန် follow-up လုပ်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် သေသပ်စွာ ဖြေရှင်းပေးရန်၊ လိုအပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန်။
- ငွေကြေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာများကို ကျွမ်းကျင်စွာ သိရှိနားလည်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန်။
- လုပ်ငန်းတာဝန်များလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဘဏ်မှညွှန်ကြားထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ တာဝန်ကျေပွန် စွာ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
- ဘဏ်ခွဲ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိရောက်အကျိုးရှိစေရန်နှင့် တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်။
- Customer Service ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကောင်းမွန်သော အကြံဉာဏ်များ ၊ အဆိုပြုချက်များပေးခြင်းဖြင့် ပံ့ပိုးမှုပေးရန်။
- ဘဏ်ခွဲ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းများတွင် လိုအပ်သလို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်။
(က) လူအများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု ကောင်းမွန်ရမည်။
(ခ) လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အချိန်မှီ ပြီးစီးနိုင်ရမည်။
(ဂ) လုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ်ဂရုပြုနိုင်ရမည်။ တာဝန်ယူနိုင်ရမည်။
(ဃ) စာအရေးအသားနှင့် စကားပြော ကောင်းမွန်ရမည်။
(င) အရေးကြီးသော၊ အဓိကဖြစ်သော ဘဏ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန် များအား ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိနားလည်ထားသူဖြစ်ရမည်။
(စ) ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ တာဝန်များအတွက် ငွေကြေးကို ကျွမ်းကျင် စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သော အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
(ဆ) ၄၀ ကီလိုဂရမ်ရှိသော အလေးချိန်အား သယ်မနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(ဇ) စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်သူများအားရှောင်ကျဉ်၍ ရိုးသားဖြောင့်မတ် တာဝန် သိစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဈ) Customer သိရှိလိုသောအချက်များကို အရေးထားအာရုံစိုက်၍ စဉ်းစား ဖြေကြားပေးနိုင်ရမည်။
(က) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူ၊ LCCI Level II, III (သို့) စီးပွားရေး Diploma တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
(ခ) Microsoft Word, Microsoft Excel နှင့် E-mail အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
(ဂ) အချိန် ၁ မိနစ်အတွင်း အင်္ဂလိပ်စာလုံးရေ အနည်းဆုံး ၂၅ လုံး ရိုက်နှိပ်နိုင်ရ မည်။
(က) သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
(က) အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံ အသင့်အတင့် တတ်ကျွမ်းရမည်။
*အင်တာဗျူးအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများကိုသာ ဆက်သွယ်ပါမည်။*
Have you graduated fromauniversity ?
Do you have basic Microsoft Excel knowledge ?
How would you describe your interpersonal & communication skills ?